I-China 5 IN 1 Wireless TYPE C HUB nge-HDMII, 100 W PD, 3xUSB3.0 fektri nabaphakeli | I-Huachuang Electronic
I-5 IN 1 TYPE C HUB engenantambo nge-HDMII, 100 W PD, 3xUSB3.0
Igama lomkhiqizo: 5 Ku-1 Wireless USB C Adapter
Amachweba: Thayipha C Ku-PD 100W + 4K HDMI + 3 * USB 3.0
Isisindo: 30 g
Ubukhulu: 85 * 28.5 * 9 mm
Indwangu: Icala le-Aluminium + PC
1, 【I-HCET Technology】 Ukunikezwa kwemali eyi-1 Year ukubuyiselwa / ukubuyiselwa esikhundleni kanye nensizakalo yamakhasimende enobungane. Yakhelwe ku-chip ethuthukisiwe ngokusetshenziswa kwamandla okuphansi, ukushesha kokushisa ukushisa nokusebenza kahle kokudlulisa idatha.
2, 【Ukulawula Ukushisa】 Sebenzisa ubuchwepheshe obufanayo bokuqothula ubushushu njengeMacBook Pro ukwelula impilo yokusebenza futhi unikeze ukusebenza okuhle. Zenze ziphephe futhi zithembeke lapho kuhlala ama -ororo.
3, 【I-5 IN 1 Wilress USB C Hub】 Xhuma kumadivayisi we-MacBook Pro wakamuva noma e-USB-C ngehabhu le-multi-USB-C eliqukethe imbobo yokushaja ye-USB C ngokulethwa kwamandla, imbobo ye-4K HDMI, amachweba ama-3 USB 3.0 akuvumela ukuthi uxhume i ikhibhodi, igundane, umshayeli we-USB, iDiski yangaphandle kuMacBook Pro.
4, 【Ukulethwa kwamandla hu I-USB Type hub ye-USB ishaja i-MacBook Pro yakho noma amanye amadivaysi wohlobo C lapho kuxhuma i-100W port shipping. Manje amadivaysi amaningi ngokwengeziwe ne-PD Pro Support entsha ye-Mac Ngokulethwa kwamandla, imbobo eyodwa ye-USB-C ingakunika isipiliyoni sokusheja okusheshayo kwe-Blazing. Qondanisa kahle iMacBook Pro.
5, 【Ukuvumelanisa kwevidiyo okucacisiwe kwe-3D Effect Video port HDMI kuze kufike ku-3840 * 2160 @ 30Hz resolution ngokulandelana. Ungajabulela ividiyo ekhanyayo yeomphumela we-3D ngokulungiswa okuphezulu kusuka kukhompyutha yakho ye-USB-C kuya ekuqapheni kwangaphandle. Ichweba le-HDMI lisekela isikrini esikhulu se-LCD TV noma libonisa iyahambisana nokukhipha i-4K Max. Ikunika ukucaca okuhle kwevidiyo ye-3D.
6, 【I-Stylish Design, i-Premium Yakha kanye neBhodi Ukuhambisana】 Okubanzi nokuvaleka kwe-aluminium okuncane okwenziwe ngomshoshaphansi kwenza kube ngumphelelisi ofanele wokubukeka kwakho futhi uzizwe endaweni entsha Grey. Indawo efanelekayo yokwandisa i-USB-C ye-Apple MacBook, i-Apple MacBook Pro, i-Apple I Mac / I Mac Pro (21.5 inch, 27 inch), incwadi yeGoogle Chrome uPixel, Dell, njengo-US, HP, Lenovo, nezinye izinhlobo eziningi zamalaptops zohlobo C .
Esedlule: I-5 IN 1 USB-C Adapter ene-HDMII, 100 W PD, VGA, USB3.0,3.5mm Jack
Olandelayo: I-5 IN 1 Adapter ye-USB C engenazintambo ene-100 W PD, SD, TF, 2xUSB3.0
amazon Uhlobo c hub
i-amazon usb c i-adapter hub
usb usb 3.0 usb c
usb c hub 5 ku-1
H11 Uhlobo C Ku-4xUSB 3.0 HUB
I-11 IN 1 I-USB-C HUB Glass efudumele nge-Ethernet ...
I-H03PD 4 IN 1 Type C To 4K HDMI, PD 100W, 2xUSB ...
I-T20 12 IN 1 Adapter ye-USB Multi-port nge-Ether ...
I-H02PD 5 KU-1 USB C Kuya ku-4K HDMI, 2xUSB 3.0, SD, T ...
I-P02 5 IN 1 USB C HUB ye-iPad Pro ene-HDMII, 1 ...